Global Voices teny Malagasy » Ny Bitsiky Ny Vahoaka Afgàna: Ny Toaka, Ny Vehivavy, Ary Ny Fifamatorana Amin’ny Iraniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2017 16:24 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika (fr) i Claire Ulrich, Erikah
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Fanoherana, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta
Manana tantara maro ho zaraina ireo bilaogera, na avy ao Afganistàna na tsia, izay manoratra lahatsoratra mikasika an'i Afganistàna : manomboka amin'ny resaka toaka ka hatramin'ny resaka vehivavy, hita ao koa ny olan'ireo mpifindra monina avy any Afganistàna.
Onne Parl [En] no manazava amintsika ny antony tsy nahitantsika toaka mihitsy teny an-tsena tamin'ny fararano lasa teo . Hoy ny nosoratan'ilay bilaogera :
« Fanazavana roa samihafa no heno miparitaka eny rehetra eny momba ny fanjavonan'ny toaka teny an-tsena tamin'ny fararano lasa teo. Voalohany : miahiahy ny amin'ny fisian'ny toaka ny governemanta Islamika. Faharoa: resaka vola izy io. Raha ny vidiny mora be, dia mazava ho azy fa tsy hiharan'ny hetra. Ka raha vao saika hampandoa hetra ny mpivarotra toaka ny governemanta, dia tsy nety nandoa izany izy ireo. Taorian'izany indrindra no nanjavonan'ny toaka, na koa ny tena marina, nisy nanafina izy ireo, araka ny nambaran'ireo olona mahafantatra tsara ny zava-misy”.
Ireo vehivavy mahonena
Milaza ny heviny mikasika ny andro fankalazana ny fetin'ny Vehivavy, ny 8 martsa, sy ny fomba fiainan'ireo vehivavy teratany Afgàna  i Afghan Lord [En].
« Indraindray, midaroka ny vadiny tsy amin'antony ireo lehilahy Afgàna , na koa te hampiseho fotsiny ny fahefàny sy ny tsy hafaliany amin'ny iray amin'ny fianakaviana. Rehefa te hikasi-tànana ny vadiny izy ireo, dia tsy am-pihambahambana no hanaovany izany fa tonga dia eo noho eo. Maro amin'ireo Ray aman-dReny no mampanambady ny zanany vavy aminà lehilahy 60 na 70 taona manankarena . Ohatra iray amin'ireo an'arivony ilay tantara manafintohina tany Kandahar mitantara zazavavy kely efatra taona nampanambadiana sahady. Betsaka ireo Ray aman-dReny no mivarotra ny zanany vavy toy ny fitaovana, tsy hiasàny saina akory hoe aiza no hipetraka izy ireo sy izay mety hiafaràny. Manodidina ny 57% amin'ireo zazavavy Afgàna no efa manambady avokoa alohan'ny taona voalazan'ny lalàna hahafahana manambady (16 taona) ary 60 ka hatramin'ny 80% amin'ireo fanambadiana ireo dia namboarina avokoa”.
Nilaza tantara nitovitovy tamin'io momba ny vehivavy Afgàna  i Safrang[En]. Hoy izy nanoratra:
« Mialoha ny andro iray hafa Iraisam-pirenena hankalazàna ny fetin'ny Vehivavy, dia sarotra ny tsy hanamarika fa tsy dia nisy fihatsaràna loatra ny fiainan'ny vehivavy Afgàna nanomboka tamin'ny fiongànan'ireo talibàna. Niara-niombon-kevitra tamin'io voalaza io avokoa ny Firenena Mikambana, ny AIHRC (Vondrona mahaleo tena Miaro ny Zon'Olombelona ao Afganistàna ), ny Fikambanana maro hafa ary lahatsoratra an-gazety. Tena mbola mampitahotra ny fisian'ny herisetra ao an-tokantrano, ny fanambadiana an-katerena, ny tsy fahafahana mahazo fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana ( ary, ny mahamaika kely, dia ny fanabeazana)».
Tsy manam-petra ny maha-olombelona
Tamin'ny alalan'i Jadi  [Persiana], Iraniàna bilaogera, manampahaizana manokana momba ny teknolojian'ny fampitam-baovao, no ahitantsika fa misy vondron'olona teratany Iraniàna izay nandefa antso hanaovana hetsi-panoherana ny zava-drehetra ampizakain'ny governemanta Iraniàna an'ireo Afgàna mpifindra monina. Azo jerena ato ireo sary nandritra izany hetsi-panoherana izany . Mivaky toy izao ny sorabaventy iray « Tsy manam-petra ny maha-olombelona », ny iray indray manao hoe « Rehefa manjaka ny tsy rariny, dia lasa andraikitra ny fanoherana ».
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/31/106347/
 ny antony tsy nahitantsika toaka mihitsy teny an-tsena tamin'ny fararano lasa teo: http://kabul-diary.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
 mikasika ny andro fankalazana ny fetin'ny Vehivavy, ny 8 martsa, sy ny fomba fiainan'ireo vehivavy teratany Afgàna: http://afghanlord.blogspot.com/2007/03/afghan-women-suffer-domestic-violence.html
 Nilaza tantara nitovitovy tamin'io momba ny vehivavy Afgàna : http://safrang.wordpress.com/2007/03/09/8th-march-and-afghan-women/
 Azo jerena ato ireo sary nandritra izany hetsi-panoherana izany: http://bedoonemarz.com/blog/131